के भोलीदेखि धरानका शैक्षिक संस्था बन्द होलान् ? परिक्षा स्थगित हुन्छ कि चल्छ ?
प्रकाशित मितिः बैशाख	6, 2078
धरान । सरकारले ४० स्थानीय तहमा स्कुल, कलेजसहितका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लाे समय बालबालिकामा समेत काेराेनाकाे संक्रमण दर बढ्न थालेपछि सरकारले शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका सबै महाहानरपालिका र नगरपालिकाका विद्यालयहरु बन्द हुनेछन् । जसमा लितपुरको कोन्ज्योसोम, बाग्मती र महांकाल गाउँपालिकालाई समोवश गरिएको छैन ।
राजधानी बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका तथा इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द हुनेछन् ।
मेचीनगर, विर्तामोड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलिखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगर र भीमदत्तनगर नगरपालिकामा पनि शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी भौतिक रुपमा उपस्थित नभई वैकल्पिक विधिबाट शैक्षिक गतिविधि गर्नुपर्नेछ ।
धरानमा भोलीदेखि बन्द शैक्षिक संस्था बन्द हुने
धरानमा भोलीदेखि नै शैक्षिक संस्था बन्द हुने धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कटवालले जानकारी दिनुभएको छ । कटवालका अनुसार हिजो आइतबार उपमहानगरपालिकामा भएको बैठकमा केन्द्र सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो । हिजो भएको बैठकले जेठको पहिलो साता भित्र सबै विद्यालयले वार्षिक परिक्षा सक्ने समेत निर्णय भएको थियो । केन्द्र सरकारले धरानका समेत शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय आजै गरेपछि धरानमा भोलीदेखि शैक्षिक संस्था बन्द हुने भएको हो । शिक्षा शाखा प्रमुख कटवालले अनलाइनबाट भने विद्यालयहरुले कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने जनाउनु भएको छ ।
यता एसिसि धरानका अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले भने धरानमा कोरोनाको प्रभाव नदेखिएकोले शैक्षिक संस्था बन्द नगर्दा पनि हुने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विद्यालयहरुले चाडै वार्षिक परिक्षा सकेर विदा दिदा उपयुक्त हुन्छ ।
सुरक्षा मापदण्ड अपनाए परिक्षा गर्न पाइने
सरकारले पूर्ण रुपमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर परिक्षा सञ्चालन गर्न भने छुट दिएको छ । मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्ने, एउटा क्लासमा न्युन विद्यार्थी राख्ने र भौतिक दुरी कायम गरी परिक्षा सञ्चानल गर्न सकिने सरकराले जनाएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कटवालले पनि परिक्षाकालागी सुरक्षा मापदण्ड अपनाए बाधा नहुने बताउनु भयो ।